पाल्पा काेराेना सङक्रमित मुक्त जिल्ला ! वास्तविकता, भ्रम र यथार्थता – Sero Fero News
Home/Trending News/पाल्पा काेराेना सङक्रमित मुक्त जिल्ला ! वास्तविकता, भ्रम र यथार्थता
August 5, 2020	Trending News, प्रदेश ५, मुख्य समाचार Leaveacomment 338 Views
पाल्पामा काेराेनाका कारण ५ सय ६१ जना संक्रमित भए । जस मध्ये ५ सय ६० जना निको भएर घर फर्किएका छन् । १ जनाको मृत्यु भएको छ । यससँगै पाल्पा काेराेना सङक्रमित मुक्त जिल्ला भएकाे छ ।
पाल्पामा पहिचान भएका काेराेना सङक्रमित मुक्त जिल्ला भएता पनि समुदायस्तरमा बृहत परीक्षण भएकाे भने छैन । कोरोना संक्रमणको जोखिम भने कायम नै छ । भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने व्यक्ति नआएका कारण सक्रमण थपिएको छैन । जिल्लामा ३ हजार ९ सय ७ जनाको पिसिआर परीक्षण भएकोमा ५ सय ६१ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । संक्रमित मध्ये ५ सय १५ जना पुरुष र ४६ जना महिला रहेका छन् ।
लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभासबाट सोमबार चार जना डिस्चार्ज भएसँगै पाल्पालाइ काेराेना सङ्क्रमित मुक्त जिल्ला भनिएकाे हाे । रम्भा गाउँपालिकाका चार जना पनि पछिल्लाे समय १४ दिन आइसोलेशनमा बसेर परीक्षण बिना नै लक्षण नभएका कारण डिस्चार्ज गरिएको हो । अर्थात् उनीहरु घर जाँदा संक्रमित नै छन् कि निको भइसके भन्ने जाँच नै गरिएन । बिहीबार पनि रैनादेवी छहरा गाउँपालिका र निस्दी गाउँपालिकाका एक/एक जना गरी दुई जनालाई पीसीआर विधिबाट परीक्षण नै नगरी डिस्चार्ज गरिएको थियो । उनीहरुको डिस्चार्ज भएसँगै जिल्ला कोरोना मुक्त भएको छ ।
जिल्लामा अहिले आइसोलेशनमा १ जना पनि कोरोना सक्रमित विरामी नभएकाले पाल्पा संक्रमण मुक्त जिल्ला भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख विश्वराज न्यौपानेले बताए । उनी भन्छन् ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नै घर पठाइएकाे हाे ।’
अहिले कोरोना जाँचै नगरेर संक्रमितहरूलाई घर पठाउन थालिएपछि स्थानीयहरूमा कोरोना संक्रमणको त्रास झनै बढेको छ । पूर्वखोला गाउँपालिकामा ४ सय ३३ जनाको परीक्षण गरिएकोमा १ सय ६० जना सक्रमण देखिएको थियो । रिब्दीकोट गाउँपालिकामा १ सय २६ जनाको परीक्षण भएकोमा ५ जना संक्रमित देखिए । रामपुर नगरपालिकामा ५ सय ८७ जनाको परीक्षण गरेकोमा १ सय १७ जनाको पोजेटिभ रिपोर्ट आएको थियो । माथागढी गाउँपालिका भित्र ३ सय २२ जनाको पिसिआर गरेकोमा ३० जनामा सक्रमण देखिएको थियो । रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा ६ सय ३२ जनाको परिआर परीक्षण भएकोमा ३९ जना सक्रमित देखिएको जिल्ला स्तरीय कोभिड १९ का फोकल पर्सन श्रीकृष्ण भट्टराईले बताए ।
त्यस्तै रम्भा गाउँपालिकामा २ सय ५ जनाको परीक्षण भएकोमा ४४ जना सक्रमित देखिएका थिए । बगनासकाली गाउँपालिका ३ सय २१ जनाको परीक्षण भएकोमा ४२ जना पोजेटिभ, तिनाउ गाउँपालिकामा १ सय ९९ जनामा परीक्षण गरिएकोमा ८ जना सक्रमित, निस्दी गाउँपालिकामा ३ सय ३२ जनामा पिसिआर परीक्षण भएकोमा ९९ जनाको पोजेटिभ, तानसेन नगरपालिकामा ६ सय ३६ जनामा परीक्षण भएकोमा १४ जनामा मात्र संक्रमण देखिएको थियो । यसैगरी जिल्लाका अस्पतालहरुमा १ सय ६ जनाको परीक्षण भएकोमा ३ जनामा सक्रमण देखिएको थियो ।
Previous बुटवलकाे लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीमा कोरोना
Next काेराेनाले प्रत्येक १५ सेकेण्डमा एक जनाको मृत्यु, ७ लाख बढीकाे मृत्यु